किन उठ्छ रिस अनि कसरी नियन्त्रण गर्ने ? – Sabaikoaawaj.com
किन उठ्छ रिस अनि कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
बुधबार, माघ १०, २०७४ 7:22:33 PM	मा प्रकाशित
भनिन्छ -रिसले विध्वंस मच्चाउँछ। प्राय : स-सानो कुरालाई लिएर झर्किने वा रिसाउने मानिसको बानी हुन्छ।
त्यो झर्किने वा रिसाउने बानीले स्वयम्लाई पत्तो नपाई नोक्सान पुर्‍याउँछ। आफू मात्र पनि होइन, आफन्त र साथीभाईमा पनि त्यसको नकारात्मक असर पुग्छ।
रिसले सानो मात्र होइन ठूलो कामलाई पनि धक्का पुर्‍याउँछ। सानो कुरामा रिस नियन्त्रणका गर्न नसक्दा जीवनभरका लागि ठूलो क्षति पुग्‍न समेत पुग्‍न सक्छ । र, त्यसमा पछुतो बाहेक अरु केही हुँदैन। त्यसैले चिकित्सक भन्छन्, ‘जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संयमित बन्‍नुपर्छ या रिस नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ।’
मनोविद् आदर्श प्रधानकाअनुसार नाम, पद, प्रतिष्ठाका लागि जति मेहेनेत गर्दा सोचे अनरुपको प्रतिफल आएन भने वा आर्थिक अभावका कारणले पनि धेरैमा रिस उठ्ने समस्या हुन्छ।
जाँडरक्सीको कुलतमा परेकालाई अझ धेरै रिस उठ्छ। अपेक्षा गरे अनुसारको माया,प्रेम नपाएमा पनि रिस उठ्छ। प्रधान भन्छन् : भावनात्मक कुरा गर्दा प्राय रिस र प्रेमको प्रसँग बढी जोडिन्छन, रिसाउनलाई पनि उर्जा चाहिन्छ भने प्रेम गर्नलाई पनि त्यसैको आवश्कता पर्छ।’
किन रिस उठ्छ ?
रोग, भोक, सोख लगायत कारणले मानिस आफै पिरोलिएका हुन्छन् । त्यस्तो बेला उनीहरुले अरुका सामान्य कुरालाई पनि गहिरो तरिकाले बुझ्छन र अचानक रिसाउँछन्।
कतिपय मानिस जन्मजात रिसाहा हुन्छन। कतिपयको पछि विकसित हुनछ । बाल्यकालमा धेरै कुटाई खाएका, झैझगडाको वातावरणमा हुर्किएकाहरुमा धेरै रिस उठ्ने बानी हुन्छ।
उनीहरुले त्यो बानी नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयास गरेपनि असफल हुन्छन्। र, त्यो उनीहरुको कमजोरीको रुपमा रहिरन्छ।
प्रतिकुल वातावरणका कारण धेरै मानिस झ्वाट् रिसाउने गर्छन। सोचे जस्तो नहुनु, नदेखिनु वा नभेटिनुले मानिस अकास्मात रिसाउँछन्। त्यसको असर स्वय्मलाई पुग्छ नै आसपासमा रहेकालाई पनि असर पुग्छ।
रिसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
ध्यानले जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने काम गरेको हुन्छ । तनावमुक्त जीवनका लागि ध्यानले शान्तीपूर्ण वातावारण सिर्जना गर्छ । त्यसैले दिनमा कम्तिमा एक पटक १५ देखि २० मिनेट सम्म भएपनि ध्यान गर्नुपर्छ। मिठो संगीत सँगै शान्त स्थानमा ध्यान गर्नाले मन पनि शान्त हुन्छ। ध्यानले क्षमता अभिवद्धि आत्माबिश्वास बढाउनुको साथै शरीरलाई स्फुर्ति राख्नुको लागी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
कुनै छलफल होस् या साथीभाईसंग कुराकानी गर्दा होस् बोल्नुपुर्वक विचार पु¥याउन सकियो भने त्यहाँ कुनै किसिमको झगडा, कोलाहल हुदैन र एक अर्कामा खुलेर विचारह आदान प्रधान गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा रिस हावी हुन पाउदैन ।
कुनै कुरामा चित्त बुझेको छैन या कुनै करामाथि रिस उठेको छ भने समाधानको विकल्प खोज्नु पर्छ । जसले जे गरेको हो त्यही किसिमको जवाफ वा प्रतिक्रिया दिँदा अपेक्षाकृत नतिजा नआउन सक्छ। त्यसैले झगडा हुन लागेका बेला आफुलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । कसैले कुट्न थाल्यो भने या अपशव्द बोल्न थाल्यो भने आफुले पनि त्यही गर्नु हुँदैन । त्यो बेला त्यस्ता व्यक्तिबाट टाढा रहनुपर्छ।
रिस उठेको बेलामा रिसलाई दवाउने होइन की आफुलाई रिसबाट मुक्त गराउने कलाको अभ्यास गर्नुपर्छ । र, आफुलाई तनाव मुक्त बनाएर मनलाई हलुका बनाउने प्रयास गर्ने गर्दा पनि रिसबाट तनावमुक्त बन्न सकिन्छ । संगीत सुन्ने, राम्रो राम्रो पुस्तक अध्ययन गर्ने, नृत्य गर्ने, गुम्ने गर्नु पर्छ । त्यसले मनलाई आनन्द प्रदान गर्छ।
रिसलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनको लागी तनावपूर्णमुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । बाहिरी वातावरणमा समायोजन हुन सकियो भने पनि रिसलाई शान्त पार्न सकिन्छ जसका लागी कोलाहाल र अशाान्तबाट निस्किएर बाहिरीतिर हिडडुल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १०, २०७४ 7:22:33 PM